पाेखराकाे मणिपाल अस्पतालमा जन्मिए चम्ल्याहा शिशु , कति छोरा कति छोरी ? - News20 Media
January 16, 2020 N20LeaveaComment on पाेखराकाे मणिपाल अस्पतालमा जन्मिए चम्ल्याहा शिशु , कति छोरा कति छोरी ?
पोखरा । पोखरामा एक युवतीले चम्ल्याहा (चार शिशु) लाई जन्म दिएकी छन्। स्याङ्जाको पुतलीबजार –१, घर भएकी सुनिता प्रधानले बिहिबार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा एकैपटक ४ शिशुलाई जन्म दिएकी हुन्। उनले ३ छोरी र १ जना छोरालाई जन्म दिएकी हुन् ।
मणिपल कलेजमा बिहीबार तीन छोरी र एक छोरा जन्माएको उनको सल्यक्रियामा संलग्न डाक्टर डा. महेन्द्र पाण्डे जानकारी दिए ।उनले पहिलो बच्चा छोरी १.६ किलोग्राम तौलकी छोरी, दोश्रो १.३ किलो ग्रामको छोरा, तेश्रो छोरी १.३ किलो ग्राम र चौथो १.४ किलोग्रामकी छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् ।
अस्पतालका शल्य चिकित्सक डा. महेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले शल्यचिकित्साको माध्यमबाट ४ शिशुलाई जन्म दिइएको हो। बच्चा तथा आमाको स्वास्थ्य शकुशल रहेको अस्पतालले जनाएको छ । एकैपटक चार शिशुलाई जन्म दिइने घटनालाई दुर्लभ मानिने गरेको छ ।